मंसिर १, काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्म राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले रू. ६ करोड २० लाख ८६ हजार खुद नाफा गरेको छ ।
बुधवार सार्वजनिक कम्पनीको उक्त अवधिसम्मको अपस्किृत वित्तीय विवरण अनुसार गत वर्षभन्दा यस वर्ष कम्पनीको खुद नाफा १९ दशमलव ८८ प्रतिशत वृद्धि भएको हो । गत वर्ष यस अवधिसम्म कम्पनीले रू. ५ करोड १७ लाख ९२ हजार खुद नाफा गरेको थियो ।
यस वर्ष कम्पनीको आम्दानी करिब १९ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । गत वर्ष रू. १२ करोड ३१ लाख ८ हजार आम्दानी गरेको कम्पनीले यस वर्ष रू. १४ करोड ६५ लाख ३७ हजार आम्दानी गरेको छ । हाल कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. २६ करोड ६६ लाख ३९ हजार रहेको छ ।
जगेडा कोष रकम भने गत वर्षभन्दा यस वर्ष ६ दशमलव १९ प्रतिशत बढेर रू. ३ अर्ब १७ करोड ९५ लाख ५५ हजार कायम भएको छ । बीमा कोष रकम गत वर्ष भन्दा ८ दशमलव १४ प्रतिशत बढेर रू. २ अर्ब ४६ करोड १२ लाख २३ हजार पुगेको छ ।
यस वर्ष कम्पनीले रू. ४४ करोड ६७ लाख ८० हजार कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ । गत वर्ष यो रकम रू. ६५ करोड ४२ लाख ४५ हजार थियो । गत वर्षभन्दा यस वर्ष कम्पनीको कुल बीमाशुल्क आर्जन रकम ३१ दशमलव ७१ प्रतिशत कम भएको हो ।
कुल दाबी भुक्तानी भने यस वर्ष कम्पनीले रू. २१ करोड ५८ लाख १५ हजार गरेको छ । गत वर्ष यो रकम रू. १ करोड ४१ लाख ५० हजार थियो । वार्षिक प्रतिशेयर आम्दानी रू. ९३ दशमलव १४ रहेको कम्पनीको प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. १ हजार २९२ दशमलव ४६ रहेको छ ।